Kaniiniga P-piller wuxuu yareeyaa raaxada iyo damaca galmada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaniiniga P-piller wuxuu yareeyaa raaxada iyo damaca galmada
Publicerat tisdag 23 augusti 2016 kl 12.14
Kaniiniga ka hortagga uurka P-piller waxuu wax u dhimaa damacaaga galmo iyo dareenkagaa raaxo. Arrintan waqti dheer ayaa la hadal yahayey laakiin hadda ayaa markii ugu horey cilmi ahaan la xaqiijiyey.
Rugta Karolinska intitutet ayaa daraasad ku sameysey 332 ruux oo da’dooda u dhaxeyso 18-35 sano. Dadka daraasad lagu sameeyey ayaa labo koox loo qeybiyey, koox waxaa la siiyey kaniiniga p-piller halka kooxda kale la siiyey kaniini ka sameysan sonkor.
- Waa daraasadii ugu horeysey oo muujisa in kaniniga p-piller uu saameeyo damaca (rabitaanka) galmo ee ruuxa. Awal sidaas in ay tahay lamo ogeyn madaame aysan jirin daraasad cilmi oo sidaas muujisa , ayey tiri Angelica Lindén Hirschberg oo ah caalin ku taqsusay cudurada haweenka.
Saameyn Negativ ah
Saddxe bilood kadib cilmi baarayaasha waxay u kuurgaleen sida ay wax iskaga baddeleen galmadooda kooxa daraasad lagu sameynayey.
- Markey timaado jamashada, kacsiga iyo qanacsanaanta, waxaan aragnay isbeddel negativ ah oo kaniinga p-piller sababay. Laakiin timaado biyo baxa wax isabddel ah uma keenin haweenka, ayey Angelica Lindén.
Angelica Lindén Hirshberg ayaan ku talineynin in dadka iska dayaan qaadashada kaniiniga p-piller balse waxay rajeneysaa in darasadan ay sabab u noqoto talooyin fiican la siiyo dadka qaadanaya dawooyinka ka hortagga uurka iyo in la badiyo daraasadaha lagu sameeyo dawooyinkan. Waayo aad bay u yaryahiin daraasadaha illaa iyo hadda lagu sameeyey dawiinka ka hortagga uurka.
– Dawooyinkan waxaa qaada sannooyin badan haween qaafimaad qabo, kuwaas oo maalin kasta qaada kaniiniga p-piller. Wax la qadan karo mahan dawadan saameyso caafimaadka qofka iyo galmadiisa, ayey tiri.